UPercy Bysshe Shelley. Imibongo emifutshane emithandathu yokuzalwa kwakhe. | Uncwadi lwangoku
Namhlanje, umhla we-4 ka-Agasti, uphawula isikhumbuzo esitsha se kuzalwa Yembongi yesingesi UPercy Bysshe Shelley. Ngokuchanekileyo kulo nyaka iminyaka emibini yokushicilelwa kwe Frankenstein, kumfazi wakhe UMary Shelley. Esi sibini sisalathiso esisisiseko sothando lwaseYurophu. Kwimemori yakhe, ndiyakhetha le mibongo ukukhumbula.
1 UPercy Bysshe Shelley
2 Imibongo ekhethiweyo
2.1 Uthando, iNhlonipho, iThemba
2.2 Njengomntwana, ndandifuna iziporho
2.3 Ndiyoyika ukwanga kwakho
2.4 Ivela kwiifiriyi
2.5 Xa kufa amazwi athambileyo
2.6 Ifilosofi yothando
UPercy Bysshe Shelley
Wazalelwa e-Field Place, eNgilani, e 1792. Kwintsapho esisityebi kakhulu, wafunda kwikholeji eyaziwayo yase Eton emva koko kwiYunivesithi yaseKholeji Oxford. Wagxothwa apho ngenxa yokupapasha igama elibi elinelungelo Isidingo sokungakholelwa kubukho bukaThixo. Xa ndifika ku Londres, Wathandana nentombazana eneminyaka eli-16 ubudala, IHaretet westbrook, abaleke naye watshata naye. Wayehlala eYork, eIreland naseWales. Kulapho ke wabhala khona umbongo wakhe wokuqala omkhulu U-Queen Mab.
Umtshato kaHarriet waphela, wagqiba ukuzibulala, kwaye uShelley waphulukana nokugcina abantwana bakhe babini. Emva koko wagula isifo sofuba wemka waya e-Itali ngo-1818. Wayesele edibene UMary Wollstonecraft, intombi yesithandi sobulumko uWilliam Godwin, kwaye wayebalekile nayo.
Bahlala eMilan, eVenice, eNaples naseFlorence. Kwakuyiminyaka emine yokugqibela yobomi bakhe awathi wabhala eyakhe yobugcisa: umdlalo weqonga Prometheus ukhululwe, intlekele ICenci, imibongo eyahlukeneyo enje Ode ukuya kwiNtshona Wind, Ode kwilark o Imimosa, kunye neelenies Adonayi, Uphefumlelwe emva kokufa kukaJohn Keats.
UShelley unjalo Enye yeembongi zesiNgesi ezithandwayo, kunye noJohn Keats no Lord Byron, bahlobo bakho. Kumsebenzi wakhe, ingcamango kunye nokholo kwikamva lomntu, kodwa ikwangeniswa melancoly.
Le mibongo emifutshane emi-6, imizekelo ngqo yomongo wayo yonke imibongo.
Uthando, iNhlonipho, iThemba
Uthando, iNhlonipho, iThemba, njengamafu
Bahamba bayabuya, baboleka imini enye.
Ukuba umntu ongafiyo wayenamandla onke,
Wena -ignoto kunye ne-sublime njengoko unjalo-
ungashiya into yakho emphefumlweni wakhe.
Wena, umthunywa wothando,
ukuba ukhula emehlweni omthandi;
Wena okhulisa ingcinga emsulwa
elinjani lona iliso kwilangatye elifayo!
Sukuhamba xa isithunzi sakho sifikile ekugqibeleni:
ngaphandle kwakho, njengobomi noloyiko,
bethuna yinyani emnyama.
Njengomntwana, ndandifuna iziporho
kumagumbi azolileyo, emiqolombeni, kumabhodlo
namahlathi aneenkwenkwezi; amanyathelo am ayoyikeka
babelangazelela ukuncokola nabafi.
Wabiza loo magama ngenkolelo
uyangena. Kwakungekho nto ukukhangela.
Njengoko bendicinga ngentsingiselo
yobomi, ngexesha lomoya ovunguzayo
bungakanani ubomi kunye nefecund
iintaka ezintsha nezityalo,
ngequbuliso isithunzi sakho sandifikela.
Umqala wam wakhala ngesithonga.
Ndiyoyika ukwanga kwakho
Eyabhalwa ngo-1820, yapapashwa emva kokufa ngo-1824.
Ndiyoyika ukwanga kwakho, ntombazana ethambileyo.
Awudingi koyika eyam;
Umoya wam uphelelwe lilize,
Ndiyoyika ukuthwala kwakho, izijekulo zakho, isizathu sakho.
Ukuzinikela kunye nentsingiselo ayinatyala
kunye nentliziyo yam ekuthandayo.
Yapapashwa emva kokufa kwi-anthology ye-1839, Imisebenzi yeZibongo, ihlelwe nguMary Shelley.
Ndanxila kule wayini yobusi
yekokoko yenyanga edlalwa zii-fairies
eqokelelwe kwiiglasi ze-hyacinth:
igumbi lokulala, amalulwane kunye neenyosi
balala kwimingxunya okanye engceni,
kwintendelezo eyinkqantosi kwaye elusizi yenqaba;
xa iwayini ichithekileyo emhlabeni wehlobo
okanye phakathi kombethe ophuma umphunga,
onwabile amaphupha abo amyoli abe
kwaye belele bembombozela ngenxa yovuyo lwabo. kulungile bambalwa
ii-fairies eziphethe ezo ntsingiselo zintsha.
Xa kufa amazwi athambileyo
Oku kunokwenzeka yenye yezona zilungileyo kwaye ikwaqwalaselwa njengenye yezona zinto zimele ezothando. Inkcazo engapheliyo yendlela iinyani kunye neemvakalelo ezingalityalwanga kwaye zihlala zihleli kwimemori nakwintliziyo ngaphandle kokuhamba kwexesha.
umculo wakhe usangcangcazela kwimemori;
xa ii-violets ezimnandi zigula,
Ivumba lalo elihlala ezingqondweni.
Amagqabi e-rose rose, xa i-rose isifa,
bafumene ibhedi yesithandwa;
Ke kwiingcinga zakho, xa umkile
uthando luya kulala.
Yayilwa ngo-1820 yaza yapapashwa kwi- intetho ukusuka ngo-1866: Imibongo ekhethiweyo kaPercy Bysshe Shelley.
Imithombo ixubene nomlambo,
Imimoya yezulu idibana ngonaphakade,
Akukho nto ehlabathini eyahlukileyo
Zonke izinto ngomthetho kaThixo
Kutheni ndingafanele ndiyenze nawe?
Bona iintaba zanga isibhakabhaka esiphakamileyo
Kwaye amaza ayagudla elunxwemeni;
Akukho ntyatyambo iya kuba ntle
Ukuba uyabadelela abantakwenu:
Ukukhanya kwelanga kuyawuthanda umhlaba,
Kwaye inyanga ibanga ulwandle:
Luthini olu thando
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » UPercy Bysshe Shelley. Imibongo emifutshane emithandathu yokuzalwa kwakhe.